Nlegharị anya njem nlegharị anya nke Slovenia mgbe Mma Queen Melanie Trump na-eche ncheta na Sevnica gosipụtara ya dị ka dike
Home » Na-agbasa News Travel » Nlegharị anya njem nlegharị anya nke Slovenia mgbe Mma Queen Melanie Trump na-eche ncheta na Sevnica gosipụtara ya dị ka dike
Njem nleta na Slovenia pụtara green njem. Mgbanwe ihu igwe bụ nnukwu ihe na Slovenia nke gụnyere obere obodo Sevnica. Kedu ihe jikọrọ Washington DC na obere obere obodo Slovenia nke Sevnica? Site na onye isi ala Trump na-agba alụkwaghịm na nkwekọrịta ihu igwe nke Paris, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ enweghị ike ịbụ ihe kpatara ọtụtụ mgbakwasị ụkwụ. Ọdịdị ọhụrụ dị n'etiti obodo abụọ ahụ abụghị oke ma ọ nwere ike bụrụ na obodo abụọ ahụ nwere ihe ncheta ama.
Ohiri isi nke ala nkịtị na ohere ndị njem maka nke a Obodo Slovenia bụ onye ọtụtụ ndị na-ahụ ugbu a dị ka National Hero nke Slovenia. Dike bụ nwanyị mbụ nke United States, Melania Trump, onye America bụbu onye nlereanya ejiji n'oge ochie na Slovene. Amụrụ na Novo Mesto dika Melanija Knavs, Nwanyị Mbụ tolitere na Sevnica, na Yugoslav Republic of Slovenia. Sevnica bụ obodo dị n'akụkụ aka ekpe nke Osimiri Sava na etiti Slovenia. Ọ bụ ebe izu ike ma bụrụkwa nke sitere n'ike mmụọ nsọ dika Slovenia Tourism.
Ndi Sloven nwere obi uto banyere eze nwanyi mara nma ma buru onye mere ka ndi mmadu hu ya n'anya ma nwee obi uto dika Nwanyị Nwanyị nke United States of America. Obodo ya kpughere ihe oyiyi osisi a pịrị apị na Fraịde. Ihe akpụrụ akpụ nke Liberty na Slovenia na-egosi Oriakụ Trump chọrọ na uwe na-acha anụnụ anụnụ nke Ralph Lauren Collection ọ yi na di ya Donald Trump's 2017 ntinye, na-egosi ka ọ na-efegharị aka ya.
Onye nyere ihe osise a bụ onye omenka America nọ na Berlin bụ Brad Downey nyere ya ma kee ya Ales “Maxi” Zupevc, onye omenkà obodo Slovenia nke obodo ahụ, onye ji chainsaw rụpụta ụdị onye Nwanyị Mbụ.
Ndị bi na mpaghara nyere echiche ha banyere akpụrụ akpụ nke Melania, nke sitere na mmasị na nlelị.
Sevnica akụkụ ochie dị n'okpuru Sevnica Castle na elu ugwu nke Castle Hill, ebe akụkụ ọhụrụ nke obodo ahụ gbatịrị na ndagwurugwu dị n'etiti ugwu na ndagwurugwu Sava. Ruo ọtụtụ narị afọ, obodo nke Sevnica dị na mpaghara n'etiti mpaghara akụkọ abụọ nke Alaeze Habsburg: Carniola na Styria. Ebu ụzọ kpọọ ya na akwụkwọ edere na 1275. N'oge a, obodo a bụ ebe kachasị mma maka izu ike ma pụọ ​​na mkpọtụ obodo ahụ. Ọ dị n’akụkụ osimiri Sava, ihe dị ka kilomita iri itoolu site na Ljubljana, isi obodo Slovenia.
“Sevnica bụ otu n’ime obodo ndị na-ero ụra nke na-eme ka mkpọtụ na-eme ka a ghara ikwu okwu mgbe ụfọdụ site n’itinye ụda injin nke ụgbọ ala na-agafe. Iguzo n’etiti obodo, ị ga-anụ nnụnụ na-ebe ákwá - ọ dịghị ihe ọzọ. N'otu oge, Sevnica bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ihe dị ka mmadụ 5,000 bi na ya. Ahịhịa ahịhịa ọ bụla dị na ihu na-achapu oke, okooko osisi dịkwa ebe niile OZI OZI n’isiokwu ya n’April.
Obodo mara maka Castlọ Sevnica na ụlọ ọrụ ihe nka ya, nke nwere mkpokọta ihe ngosi nka dị iche iche na ngosipụta ndị ọbịa. Nwekwara ike ịga otu n'ime ụka 47 dị na obodo ma ọ bụ ebe ihe ọmụmụ ihe ochie nke mmezi Ndị Kraịst nke mbụ site na narị afọ nke 5 ma ọ bụ 6th na Ajdovski Gradec dị n'elu Vranje.
Na nso, ugwu Lisca, nke dị 947m nke dị elu karịa oke osimiri, bụ echiche magburu onwe ya, yana ikuku ikuku ya na-adọta ọtụtụ ndị na-eme mkpọtụ na ndị na-akwụ ụgwọ. Na-òkù inyocha ndị Bizeljsko-Sremiška na Gornjedolenjska Wine Road. Echefula ile onwe gị na ụfọdụ mmanya dị ụtọ na-acha ọbara ọbara na sausaji akọrọ, nke bụ ọpụrụiche mpaghara.
Mgbe Melania achicha, mmanụ a honeyụ Melania, na ọbụnadị Melania slippers, obodo Slovenia nke nwanyị mbụ nke United States ga-etu ọnụ ugbu a ihe oyiyi nke nwa ya nwanyị a ma ama - n'agbanyeghị nke chere ihu na nyocha agwakọtara agwakọta.
E guzobere ihe oyiyi ahụ dị na mpụga Sevnica na Fraịde ma bụrụkwa ọgụgụ isi nke onye ọgụgụ isi America bụ 39, Brad Downey, onye kwuru na ọ bụ ihe ncheta mbụ ebe a raara nye nwunye Onye isi ala US Donald Trump.
Edere ihe osise a na osisi site na iji ịya igwe ma gosi ya Melania na uwe na-acha anụnụ anụnụ na-ewelite aka aka ekpe ya na ngosi aka, na-eulatingomi ihe ọ mere na ntinye nke 2017 nke di ya.
Ọ bụ ụzọ aghụghọ ya mere ụfọdụ ndị nkatọ na soshal midia ịkpọ ya “onye ụjọ.”
"Enwere m ike ịghọta ihe kpatara ndị mmadụ ji eche na nke a dara dị ka nkọwa nke ọdịdị ahụ ya," Downey kwuru, mana siri ọnwụ na ọ chọpụtara na nsonaazụ ya "mara mma nke ukwuu."
Kemgbe Donald Trump malitere ọchịchị na 2017, ụra Sevnica abụrụla ihe ndọta maka ndị njem nleta na ndị nta akụkọ na-achọ ihe gbasara nwaanyị onyeisiala Amerịka gara aga. Ndị ọchụnta ego nọ na-etinye ego na mbubata ahụ, na-enye ọtụtụ ihe melania nke ngwaahịa na ngwa ahịa yana njem nke mpaghara ahụ na-ewere saịtị ndị dị na nwata.
Downey bịara na akpụrụ akpụ a dị ka akụkụ nke ọrụ iji chọpụta mgbọrọgwụ nke nwanyị mbụ nke Slovenia na onye ọrụ aka ọrụ obodo Ales Zupevc - nke a makwaara "Maxi" - iji kpụọ ihe osise ahụ n'ezie.
Downey kwuru na ihe masịrị ya bụ na a mụrụ Maxi n'otu afọ na otu ụlọ ọgwụ dị ka Melania n'onwe ya.
O kwuru na mkparịta ụka ya na Maxi nwere mere ka ọ hụ mpaghara nna nna Melania site na anya mpaghara.
“You hụrụ osimiri a nke ọ gaara ahụ dịka nwatakịrị, ị hụrụ ugwu,” ka o kwuru.
Agbanyeghị, ọ bụghị mmadụ niile ka akwadoro iji olu ha mee ihe ngosi.
Nika, nwa akwụkwọ dị afọ 24 nke na-amụ banyere ụkpụrụ ihe owuwu, kwuru, sị: “Ọ bụrụ na ihe ncheta ahụ ga-abụ ihe ọchị, onye omenkà ahụ enwewo ihe ịga nke ọma.
Ọ gbakwụnyere, "Anyị nọ na Sevnica bụ naanị ịchị ọchị ma, n'otu oge ahụ, jide isi anyị n'aka anyị n'isi aha ọjọọ (Trumps ') ahụ."
Katarina, onye dị afọ 66 bi na Rozno dị nso, kwuru na ya chere na ncheta ahụ bụ “ezigbo echiche.”
O kwuru, sị, "Melania bụ dike Slovenia, o mere ya n'elu na US.
Ebe ọdịbendị ọdịnala asaa agbakwunyere na UNESCO Ndepụta Ihe Nketa Worldwa
Ebe Ndị Finishia Kwadebere Na-adịchaghị Agba